မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သမီးဖြစ်သူကို မျှဝေပေးရမယ်အရာ (၆) ခု
Home Child Care မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သမီးဖြစ်သူကို မျှဝေပေးရမယ်အရာ (၆) ခု
သမီးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ရခြင်းကလည်း မေမေတို့ရဲ့ဘဝမှာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အမေနှင့် သမီးကြားက နှောင်ကြိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အမေနှင့် သမီးအကြားက ဆက်ဆံရေးမှာတော့ မေမေတို့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိနေပါသေးတယ်။
မေမေတို့မှာ ကလေးတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး မွေးထားတယ်ဆိုရင် ကလေးတစ်ဦးချင်းစီမှာ မတူကွဲပြားတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာ သတိရပေးပါ။ သမီးငယ်နှင့် ဖခင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကြားက လိုအပ်ချက်တွေ၊ ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအကြောင်းကို မျှဝေေပးခဲ့ပြီးပြီမို့ ဒီကနေ့မှာ မိခင်တစ်ယောက်ဆီက သမီးတွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
၁။ မေမေတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လိုအပ်ပါတယ်
မေမေတို့သမီးလေးရဲ့ အကြီးမားဆုံးပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အဖြစ် တည်ရှိနေခြင်းက သမီးလေးအတွက် ယုံကြည်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရစေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ရဲ့သမီးလေးငယ်ရွယ်စဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ အတွေးထဲမှာ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို သိမ်းပိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ခံစားရစေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သင်ဟာ သူမကို ယုံကြည်တယ်လို့ မခံစားရဘူးဆိုရင် အကျိုးဆက်က သူ့မကိုယ်သူမတောင်ယုံကြည်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစောပိုင်းမှာ မေမေတို့အနေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ သမီးတွေကိုသာ ယုံကြည်ပေးမယ်ဆိုရင် သူမကိုယ်သူမယုံကြည်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သံသယဖြစ်စရာမလိုတော့ဘဲ မကြာခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကို သင်ယူလာပါလိမ့်မယ်။
၂။ သူမရဲ့ (သူမရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ရုပ်ရည်အသွင် (သို့) အောင်မြင်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ)စိတ်အတွင်းပိုင်းလာတဲ့ တန်ဖိုးတွေကို အတည်ပြုပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကြီးပြင်းနေရတာဟာ မတရားမှုတွေအပြိုင်ရှင်သန်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ ဆိုးရွားတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့် လွဲမှားနေတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလှတရားတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေကို ပိုအထင်ကြီးလာကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုအရာတွေကို အဆမတန်လိုချင်တပ်မက်လာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူမကို ဂုဏ်ယူကြောင်းပြသဖို့လိုအပ်သလို ချွင်းချက်မရှိချစ်မြတ်နိုးကြောင်းလည်း သိစေသင့်ပါတယ်။
၃။ သမီးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်မှုရဲ့ စံပြဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ကောင်းမွန်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိခြင်းနှင့် ဂရုစိုက်ခြင်းမှာ စံပြဖြစ်ဖို့က တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ သမီးတွေကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော/ စိတ်ပိုင်းဆိုင်အရာအရပါ ပိုကျန်းမာစေဖို့ သင်ကြားပေးမှာမို့ပါ။ Self-awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီးစံပြဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သမီးတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာသောနည်းလမ်းဖြစ့် ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသရမယ်ဆိုတာကို မျှဝေပေးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ သမီးတွေရဲ့ စကားလုံးတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နားထောင်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ သူ့မကိုယ်သူမ ဘယ်လိုလေးစားရမယ်၊ ဘယ်လိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဆိုတာ ပြသပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
မေမေတို့သတိမပြုမိလိုက်ခင်မှာပဲ မေမေတို့သမီးဟာ မေမေတို့ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်တယ်ဆိုတာကို သင်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေကို မေမေတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံပါသလဲ? မေမေတို့သမီးကလည်း အဲ့ဒီ့အပြုအမူအတိုင်းပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ မေမေတို့ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထားလေးစားမယ်ဆိုရင် မေမေတို့သမီးကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ပြုမူပါလိမ့်မယ်။
၅။ သူတို့နှင့် အတူ အချိန်ဖြုန်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
အချိန်ဟာ တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးနှင့်အတူ အချိန်ဖြုန်းပေးပါ။ သူမရဲ့ မေးခွန်းတွေကို နားထောင်ပေးပါ။ အတူချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အဝတ်လျှော်ခြင်းစတဲ့ ဘဝအတွက် အရေးကြီးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို သင်ပေးပါ။ ဒီအချက်တွေဟာ အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင် အိမ်မှုကိစ္စတွေဆိုပေမယ့်လည်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောနှောင်ကြိုးအတွက် ကြီးမားသောဖန်တီးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၆။ သူမကိုယ်တိုင်အမှားတွေ လုပ်မိစေပြီး သင်ခန်းစာယူတတ်စေဖို့ ခွင့်ပြုပေးဖိုလိုအပ်ပါတယ်
ဒီအချက်က ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သူတိုရဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ သိသာထင်ရှားတဲ့အမှားအယွင်းတွေနှင့် ရုတ်တရက်နာကျင်မှုတွေနှင့်အတူ အန္တရာယ်လမ်းပေါ် လျှောက်နေတာမြင်ရတဲ့အခါ ဘယ်မိဘကမှ ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သိုပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာ ကိုယ့်သားသမီးတွေရဲ့ ဘဝကို ဘယ်မိဘကမှ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အမှားလုပ်လို့မရအောင်လည်း တားဆီးလို့မရပါဘူး။
Previous articleရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ မဖျားနာအောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
Next articleသားသားမီးမီးတို့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပျားရည်စတင်တိုက်ကျွေးသင့်လဲ???
Onlooker Play ဆိုတာ ဘာလဲ? ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်သလဲ?
သားသားမီးမီးတွေကို အမှောင်မကြောက်အောင် ကူညီဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု